Bit By Bit - Ukuqaphela ukuziphatha - 2.4 Amasu Ucwaningo
Ngenxa yalezi izici eziyishumi big imithombo idatha kanye nemikhawulo semvelo sawo idatha ngisho nokugcina ngokuphelele, hlobo luni amasu ocwaningo ziwusizo? Yilokho, singakwazi kanjani ukufunda uma singazi ukubuza imibuzo futhi musa ukusebenzisa ukuhlolwa? Kungase kubonakale sengathi abantu nje ukubukela abakwazanga eholela ekucwaningeni ezithakazelisayo, kodwa lokho akulona icala.
Ngibona amasu ezintathu eziyinhloko for nokufunda idatha elibukelayo: counting izinto, ukubikezela izinto, futhi approximating ucwaningo. Mina ngizoba ukuchaza ngamunye lezi zindlela-lapho kungase kubizwe "amasu ucwaningo" noma "ucwaningo zokupheka" -futhi Mina ngizoba imifanekiso izibonelo. La masu ungesiye alizimele noma oluphelele, kodwa ayakwenza bacwaninga ngedatha obubonakalayo.
Ukuze lalifanekisela nokuzisholo ukuthi balandele, ubala izinto ezibaluleke kakhulu uma thina empirically adjudicating phakathi izibikezelo ezivela eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma ezahlukene. Ukubikezela, futhi ikakhulukazi nowcasting, kungabasiza abenzi inqubomgomo. Ekugcineni, idatha big kuthuthukisa ikhono lethu lokwenza tilinganiso esiyimbangela kusuka idatha obubonakalayo.